नेता नेपाली काँग्रेस | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
Tag: नेता नेपाली काँग्रेस
राष्ट्रियसभा ; नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ पारित
काठमाडौँ २३ माघ : राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले ‘नेपाल
आन्तरिक विवादले वाक्क भएँ
इटहरी, पुस १७ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रको विवादले आफू वाक्क भएको बताएका छन्। देउवाका अनुसार पार्टीभित्र नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न अनेक बखेडा झिकेर विवाद
काठमाडौं, पुस १५ । नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले एकलौटी ढंगबाट पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको मिति घोषणसहितका निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन पक्षले एकलौटी ढंगबाट गरेको
देउवा र पौडेलको कुरा मिलेको संकेत, भातृसंगठनलाई पूर्णता दिने आश्वासन
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीले भातृसंगठनलाई चाडै पूर्णता दिने आश्वासन दिएका छन् । आज(बुधबार) आफ्नै निवास बोहोराटारमा नेपाल विद्यार्थीसंघका प्रतिनिधिसँगको भेटमा पौडेलले भातृ
सरकारको भित्री नियत ठीक छैनः थापा
तनहुँ,पुस ९ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारको भित्री नियत ठीक नभएको बताएका छन्। सरकारको भित्री शैली जनताको अधिकार खोस्ने भएको कांग्रेस युवा नेता थापाले आरोप
काठमाडौं, पुस ९ । पार्टीलाई गुटमुक्त बनाउँदै विधि र विधान अनुसार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धतासहित शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित भएको चार वर्ष पूरा हुन लागेको छ । विधानको अतिरिक्त
काठमाडौं, २६ मंसिर । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र हुन् । उनले काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले लिनसक्ने निर्णयबार महत्वपूर्ण खुलासा गरेका छन् । उनीसँग ऋषि
कांग्रेसः केन्द्रीय समितिको म्याद एक वर्ष थप्ने तयारी
काठमाडौं, मंसिर २५ । नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार प्रत्येक चार वर्षमा पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्छ । तर, १३औं महाधिवेशन सकिएको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिको म्याद एक वर्ष
प्रदेश सांसद र नगर सभापतीबिच कुटाकुट
वीरगन्ज, मंसिर ५ । नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य ओमप्रकाश शर्मा र कांग्रेसकै वीरगन्ज महानगरपालिका समितिका सभापति भोला कलवारबीच बुधबार बिहान कुटाकुट भएको छ। वीरगन्जको आदर्शनगरस्थित एउटा चियापसलमा बिहान उनीहरूबीच नगर
कांग्रेसलाई हात छोड्न बाध्य नपारियोस्ः देउवा
दाङ, २७ भदौ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपालाई संयमित बन्न चेतावनी दिएका छन्। नेपालगन्ज खजुरामा पार्टीको जागरण अभियानका क्रममा नेकपाका कार्यकर्ताले आफ्ना जिल्ला सभापति किरण
गगन थापा धर्नामा बसे, मन्त्रीलाई तनाब
काठमाडौं, १३ भदौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री गगनकुमार थापा कपन र चावहिल सडक ठेक्का सकिँदापनि नबनाएको भन्दै धर्नामा बसेका छन् । सांसद थापाले ललितपुरस्थित सडक
कांग्रेसले किन गर्यो रातारात मोदीलाई जम्मु-कश्मिर कदममा समर्थन ? (भिडियोसहित)
काठमाडौं, २७ साउन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जम्मु कश्मिरमा जुन कदम चालेका छन् त्यो भारतको आन्तरिक मामिला भएको टिप्पणी गरेका
सरकार काण्डैकाण्डमा मुछियो – कोइराला
काठमाडौँ, ११ फागुन । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको पुष्टि भइसकेकोले
इरानमा कोरोना भाइरसबाट पाँच जनाको मृत्यु
तेहरान, फागुन ११ । इरानमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मर्नेको संख्या पाँच पुगेको छ । इरानमा